Iphetshana leKhitshi eMhlophe linokukhupha isitshizi
Ikhaya / IFaucets yasekhitshini / WOWOW Ikomityi Yefowuni Yekhitshi Emhlophe Tsala ezantsi
Isikhenkcisi esimhlophe se-lacquer ekhitshi sinembonakalo entsha kunye nexesha lanamhlanje, kwaye sinefuthe lokuchasana nomhlwa kunye ne-anti-corrosion.
Ikhitshi eliphezulu le-arc ekhitshini le-EVE-0071-mhlophe lizisa iitayile kunye neendlela ezilula. Imigca egudileyo kunye eqaqambileyo yongeza i-charm elula kulungiselelo lwakho lwekhitshi ekhoyo. Uyilo oluphathekayo lokuphatha lwenza kube lula ukulawula ubushushu kunye nokuhamba, ngelixa elimhlophe longeza ubuhle kunye nesitayile. Uyilo olujikelezayo olunemisebenzi emibini luphucula ukusebenziseka kwaye luhlangabezana neemfuno ezahlukeneyo kwimisebenzi yokupheka. Le faucet esebenzayo nenhle yenza ikhitshi lakho lahluke.
Umsebenzi wentloko yokutshiza kabini ngokuchwetheza iqhosha: Imowudi yokuhamba kwamanzi isetyenziselwa inaliti yamanzi, imowudi yokutshiza isetyenziselwa ukugungxula, phumla ukunqanda ukutshiza. Umzimba wobhedu owomeleleyo, isakhiwo sobhedu esingena-lead, umgangatho ophezulu, unyango lomhlaba olunganyangekiyo. I-ceramic disc valve idlula umgangatho wobomi beshishini, ukuqinisekisa ukuhlala kobomi benkonzo. Ngaba unokufikelela kulawulo lobushushu bamanzi olungcono. Iphakheji ibandakanya zonke izixhobo ezinyukayo, imigca ebandayo / eshushu kunye nomzimba wompompo. Ngaphambi kokuhambisa, siya kujonga zonke iimveliso ukuqinisekisa umgangatho weemveliso. Sukuba nexhala ngokuthenga.
I-SKU: I-EVE-0071-mhlophe Udidi: IFaucets yasekhitshini tags: IFaucets yasekhitshini, Tsalela ngaphandel
I-1 kg = 2.2046 lb = 35.2740 oz
I-Wowow Best Tyhila isitya ekhitshini esineMagnet ...
I-Wowow ephezulu I-Rated Tola i-Faucets Singl ekhitshini ...